Håkan Larsson /”mhangura Properties”: zvinyorwa zvenhema kuti Kutama Board, mukati F-mutero uye zita idzva kambani | Holmbygden.se
Posted on 28 Mbudzi, 2015 kubudikidza Holmbygden.se
Iye zvino kugadzirira feverishly kuti chero nguva yokugamuchira vapoteri Stendahls skandalhus. Paaikura wokupomera uye hadzina kufambiswa zvakanaka acharamba ari muridzi itsva Håkan Larsson kubva Orebro, zvino pamwe nevasori Stendahs. Pashure Anorambwa naPetro kuti kudyidzana kuna Johan Stendahl kuratidzwa Swedish Terevhizheni News Västernorrland, hunobuda ikozvino akawanda nechokwadi itsva:
zvitupa venhema vakatumira zvikumbiro kuna Kutama Board.
Zvakare, chinja uridzi zita.
Mukati F-mutero Håkan Larsson makambani.
Nyepera kutora kuonana yeko kirabhu yemitambo.
Pasina kuronga mvumo / chivakwa mvumo kutsvaga hupoteri pokugara.
Nyepera chitupa zvikumbiro kuna Kutama Board
Håkan Larsson uye Johan Stendahl zano pamutemo gweta Michael Sterner akabvuma nhema kufefetedza chitupa zvivako Ini Anundgård mu vachiriita avo Kutama Board kuwana mvumo. The kufefetedza anotonga vabva kambani pasina F mutero uye pasina accreditation rokuongorora. Accommodation ehupfumi hanya vanogona kupupurira kuti chero wezvikoro haana kunyange ari dzavo dzokugara izvo zvichipomerwa paakaongorora protocols.
Michael Sterner akanga akaita Stendahl sezvinorevawo 2013 kana kunyange ipapo pasi magwaro venhema kuti zvivako moto dziviriro kuna Kutama Board. Zvaiita sezvo Rescue Medelpad ipapo zvikuru pachena kuti nhema.
Zvakare, chinja uridzi zita – kwete “mhangura Properties”
Just panguva zvokuvakisa kuti hupoteri pekugara 2013 chinja “Stendahl skandalhus” muridzi itsva papepa “rendi” makambani – Aros Energy kuzivisa vaiva ne mumwe waaiziva kuti Johan Stendahl. Saizvozvowo, zvakanga okupedzisira chando kana mumwe waaiziva kuti Stendahl, Håkan Larsson akatenga ehupfumi. Zvisinei, Håkan Larsson akatora, ukuwo Aros Energy kuzivisa pamwe Johan Stendahls mumiririri pamutemo sezvo chete mutungamiriri.
Zvino Zvisinei, zita, kubva Håkan Larsson Bilkonsult AB esimbi Fastigheter AB. Kana chikonzero ndechokuti Håkan Larssons kwokubatana kuna Stendahl kufukidzwa sanzwisisika.
Mukati F mutero
Mushure uwandu nechikwereti nhoroondo, munataisireva uye kushaya kuzvidavirira zvino Skatteverket vakauya F-mutero Håkan Larsson kambani Aros Energy kuzivisa. Kunyange zvazvo uyu Johan Stendahls gweta Michael Sterner agere pachigaro Board.
Tdombo Det, zvose yapfuura Mukono kuburikidza Immigration Service uye kubatana kuna Johan Stendahl, mhosva Swedish State kota bhiriyoni, kuwana Håkan Larsson Bilkonsult kubva Orebro vasaine sungano Swedish Kutama Board uye rakavhurika vatizire pokugara wokupomera dzimba.
Nyepera kutora kuonana yeko kirabhu yemitambo
Apo Håkan Larsson kuti kutsanangura nemidzi yawo Holm, akanyora kuti wakaita kuonana vemo mitambo netsvimbo. Izvi zvaipesana nokuda Holm Sportklubb, apo hapana ari kubata pamusoro chero kuchengetedzwa pokugara. Kana chero ruzivo akakurukura kuti vomumusha kana vazotaura yakarongwa.
Pasina yekuronga mvumo / chivakwa mvumo
Harina chivakwa mvumo kuti nokushanda hupoteri pekugara ehupfumi ayo. Inowanzodiwa ekuronga mvumo kana chivakwa kushanda panguva kuchinja kushandisa chivako, ndiko kuti, kana iwe enda kubva basa kune mumwe.
Refugee Accommodation nokuti kugara pamwe chete havazivi vamwe zvinodiwa yeBuilding Regulation nokuti mabasa.